धर्मनिरपेक्षता कि धार्मिक स्वतन्त्रता | eBachan Nepali Christian Magazine
धर्मनिरपेक्षता कि धार्मिक स्वतन्त्रता
– विश्वास (रामहरी) थापा
राज्य र धर्म एक – अर्काबाट अलग्ग रहेन सिद्धान्त हो । धर्मनिरपेक्षतामा २ वटा पक्षहरू लुकेको छ । पहिलो जसमा धर्महरू (हिन्दू, बौद्ध, इलाम, किराँत, इसाई आदि) बाट अलग्ग रहने हो । राज्य तटस्थ रहने पनि हो । धर्मको बारेमा राज्यले विरोध पनि गर्दैन न त समर्थन पनि । धर्मनिरपेक्षता राज्यको आँखामा सबै धर्म समान हुन्छन् । तर धर्मबाट अलग्ग हुने भनेको होइन ।
दोस्रो पक्ष कानूनको अगाडि सबै धर्म, आस्थाका तथा नास्तिक मानिसहरू समान हुन्छन् । यो नै धर्मनिरपेक्षताको मुटु हो । यही नै धर्मनिरपेक्षताको महान् अनि सुन्दरता पनि । यिनीहरूलाई छुट्टाएर धर्मनिरपेक्षता कल्पना गर्न सकिन्न । अर्को शब्दमा धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक समान पनि हो ।
राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन । धर्मको मामेलमा राष्ट्र तटस्थ हुनुपर्दछ । राज्य र धर्म फरक हुन् । सबै धर्म राष्ट्रको आभुषण हुन् । कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय, संस्थाले धर्मलाई भ¥याङ बनाएर कुनै राजनीति पनि गर्न पाइन । धर्म समुदायहरू आÇनो समुदायभित्र सिमित हुनुपर्दछ । समाजमा मिलेर रहनु पर्दछ । राज्यले धर्मलाई दाम्लो लाउनु पाइदैन ।
धार्मिक स्वतन्त्रता पनि धर्मनिरपेक्षताका भित्रैकै एक सुन्दर पक्ष पर्दछ । समाजभित्र सबै समुदाय (धर्महरू) स्वतन्त्र हुन्छ । धर्मनिरपेक्षतामा नभएर धार्मिक स्वतन्त्रता भयो भने राज्य धर्मको सापेक्ष पनि हुन सक्दछ । कतिले यही धार्मिक स्वतन्त्रता मात्र माग गरेका छन् । धार्मिक स्वतन्त्रता पुगी हाग्छ भन्ने विचार राख्दछ । यो त पूरै घर लिने कि कोठा भाँडा बस्ने जस्तै हो । धार्मिक स्वतन्त्रताभित्र धर्मनिरपेक्षता अटाउन सक्दैन । तर धर्मनिरपेक्षतामा धार्मिक स्वतन्त्रता रहन्छ ।
धर्मनिरपेक्षता अर्को सुन्दर पक्ष भनेको लोकतन्त्र र निष्पक्षतामा विश्वास गर्दछ । लोकतन्त्र र निष्पक्षतामा धर्मनिरपेक्षता हुर्कन सक्छ । लोकतन्त्रको खम्बा पनि धर्मनिरपेक्षता हो । धर्मनिरपेक्षताका विनाका लोकतन्त्र अपाङ्गसर हुन्छ ।
धर्मनिरपेक्षता नास्तिक होइन । नास्तिकहरूको ईश्वरमा विश्वास(ज्ञान) कमी मात्र हो । धर्मनिरपेक्षताले लोकतन्त्र समाजमा रूपरेखा कोर्ने गर्दछ । धर्मनिरपेक्षता नास्तिकहरूको निम्ति पनि हो । समाजमा सबै धर्म समुदायको शिक्षा, स्वस्थ्य, राजनीति आदि क्षेत्रमा समान अधिकारको विचार राख्दछ । ईश्वर मान्ने र ईश्वर नमान्नेलाई अंगाल्छ । यसको यो बेजोड पक्ष पनि हो ।
धर्मनिरपेक्षताले बाक् स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति दिने ग्यारेन्टी गर्दछ । आफ्नो धर्मअनुसार उसले बोल्न तथा अभिव्यक्ति दिन पाउनु पर्दछ । धार्मिक विश्वास आधारमा उसले अरू धर्मलाई असर नगरि जिउन पाँउदछ ।
धर्मनिरपेक्षतामा धर्म र व्यक्ति फरक हुन । व्यक्तिले आफू इच्छा गरेको कुनै पनि धर्म अप्नाउन र छोड्न वा नास्तिक हुन पाउनु अधिकारको रहेको हुन्छ । धर्मनिरपेक्षता व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । व्यक्तिले प्रयोग गर्ने वा नगर्ने व्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । व्यक्तिले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँदछ ।
धर्मनिरपेक्षता ख्रीष्टियनको मात्र माग होइन अरूको पनि हो । धर्मनिरपेक्षता भयो भने ख्रीष्टियनलाई मात्र फाइदा हुन्छ भनेर हल्ला फैलाउनु गलत हो । बल्लबल पेटमा भएको धर्मनिरपेक्षतालाई गर्भ पतनको कानून लगाएर हत्या गर्ने कोशिषको गन्ध छिमेकी धुरीबाट आइरहेको प्रष्ट नदेख्नेले पनि देखिरहेको छ । राज्यलाई अन्धो बनाउने खेल बन्दछ हुनुपर्दछ । धेरै राष्ट्रहरूले अभ्यास गरेको, अंगाल्लेको उत्कृष्ट सिद्धान्त यही हो । छोराछोरीले अविभावनसँग मागेको माग पनि हो ।
अरू धर्मका साथीहरू डराउने पर्ने अवस्था पनि छैन । अहिलेसम्म कुन ख्रीष्टियन राष्ट्रघात गरेका प्रमाण कोहीसँग छ ? फेरी किन डराउनु पर्ने । न त ख्रीष्टियनले हतियार नै उठाउछन् । न त कोहीसँग लडन नै जान्छन् । बाइबलले प्रष्ट बताउँद कि रगत र मासुको लडाइँ होइन । बरू यो देशमा सबैभन्दा वढी स्वास्थ्य, शिक्षा, बालबालिक, गरिवी क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । राम्रा काम गर्दा गर्दै कपोकल्पित आरोपमात्र लगाउने । ख्रीष्टियनले के खतरा गरे ? त्यो पनि प्रष्ट पार्नुपर्दछ । डराउनु पर्नेको कारणहरू पनि दिनु प¥यो । नत्र मित्रलाई कि शत्रु देख्ने ¤
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्यमा भनिने फेरी एकल धर्म जर्वजस्ती ल्याउन खोज्ने । फेरी सयौं फूलका फूलवारी … । यो कस्तो राज्य हो । बल्लबल पेटमा भएको धर्मनिरपेक्षतालाई गर्भ पतनको कानून लगाएर हत्या गर्ने कोशिषको गन्ध छिमेकी धुरीबाट आइरहेको प्रष्ट नदेख्नेले पनि देखिरहेको छ । राज्यलाई अन्धो बनाउने खेल बन्दछ हुनुपर्दछ ।
धर्मनिरपेक्षतामा सबैले फल्न फूल्न पाउनु पर्दछ । बगैचाका फूललाई नफूल भन्न मूर्खमात्र हो । सबैको आ–आफ्नो महत्व छ । एक धर्मलाई काखी च्याप्नु राष्ट्रको लागि हानिकारक हुन्छ । केबल द्धन्दको विजारोण मात्र हुन्छ । पूmलवारीमा सबै फूलहरू फुल्न पाउनु सबै फूलहरूको नैंसर्गिक अधिकार हो । । धर्मनिरपेक्षतामा आयोस् । यही हाम्रो प्रार्थना छ ।
Previous: पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न र प्रेस विज्ञप्ती (राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ, नेपाल)